आयोग निरिह, आचारसंहिताको धज्जी उडाए • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
आयोग निरिह, आचारसंहिताको धज्जी उडाए
काठमाडौं, भदौ २८ । चुनावको प्रचारप्रसारको क्रममा दल र उम्मेदवारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै ठूलठूला पचार्, पम्प्लेट, पोस्टर जताततै टाँसेर कुरुप बनाएका छन् । व्यानर, झण्डा र ठूलाठूला खम्बा, रुख र सडकको बिचबिचमा झुण्ड्याएका छन् । अर्को पार्टीको झण्डा र पोष्टर च्यात्नुको साथै लाउडिस्पिकरमा चर्को प्रचार दिक्क बनाएको धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका १ का कुशेश्वर महतोको गुनासो छ ।
यति मात्र होइन आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न र मतदाता रिझाउन उम्मेद्वारले भोजभतेर समेत निरन्तर गरिरहेका छन् । दलका शीर्ष नेतासमेत चुनाव चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी, गम्छा प्रयोग गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेका भेटिन्छन् । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी त यत्रतत्र सर्वत्र चलिरहेका देखिन्छन् । यसले देशमा नियमकानन कमजोर भएको र उदण्डता बढेको जनकपुर उपमहानगरपालिका ८ का लालबाबु चौधरीले बताउनुभयो ।
आचारसंहिताको व्यापक उलंघन भइरहेपनि यसलाई रोक्न र उलंघन गर्नेलाई कार्वाही गर्ने जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव नजिकिदै जाँदा उम्मेद्वारमा चुनाव जसरी पनि आफैले जित्नुपर्ने मनोविज्ञान झांगिदै गएको पाइएको छ । उनीहरु विकासका मुद्दा र एजेण्डाको बहसमा कम तर आचारसंहिताको उल्लंघनमा बढी सक्रिय छन् ।
आचारसंहिता उल्लंघनको घटना बढिरहेपनि यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले खासै पहल गरेको देखिएको छैन । तर अनुगमन भैरहेको आयोगको दावी छ । आचारसंहिता उल्लङघनका घटना बढेको गुनासो आएपछि सिरहा, पर्सा र जनकपुरमा चुनावी प्रसारप्रसारको लागि निकालिएको र्‍याली रोक्ने, पर्चा पम्प्लेटहरु नष्ट गर्ने लगायतका काम गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बुधबारदेखि अरु जिल्लामा पनि आचारसंहिता पालना भए–नभएको अनुगमन गरिनेछ । आयोगले आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नआए, उमेद्वारी रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।
कमल थापालाई मुख सम्हालेर बोल्न ओलीको चेतवानी
रोल्पामा फेरि माकेका उम्मेदवार सोनाम चढेको गाडीमा बम प्रहार
महेश बस्नेतको स्वागतमा प्रतिस्पर्धा महेश बस्नेतको स्वागतमा प्रतिस्पर्धा